Ngokuvamile, inyama ekheniwe isisiza ukuba sihambe emgwaqeni, ngokuhamba. Kodwa uhambo aluhlali lukhulu ngokweqile, futhi ngingathanda ukubona ukuthi ibhange linenyama yekhwalithi ngempela, hhayi indawo yalo yesoyi. Ukudla kwasekuseni okuwusizo kwezokuvakasha okusebenzayo kuyisinyathelo sokuqala endleleni eya kwamandla usuku lonke.
Ngesinye isikhathi ngepikiniki yomfundi, saneliswa yizishibhile "zekusasa lokuvakasha" futhi sajabula ukukhohliswa ngalokho okungaphakathi. Namuhla isitshalo akuyona ishibhile eshibhile. Ngaphezu kwalokho, njengengxenye yomkhiqizo, abakhiqizi bacacisa inyama nenyama kuphela.
Noma kunjalo, ukupakisha ngokuvamile kuvimbela kithi "isithombe senyama" sangempela - ngemuva kwezindonga ze-tin awukwazi ukubona lutho. Futhi sithenga "ikati esitokisini," ngaphandle kokuthi, eqinisweni, ibhange aliyona ingilazi. Ngaphakathi kwe-autopsy, kuvela, ngaphandle kwalokho, hhayi ikati, kodwa futhi ucezu omuhle wesithambile esibizwa ngokuthi i-veins, fat and cartilage, egijima emhluzeni ongacacile, ulimi aluphendukile. Ukuze kube lula ukukhethwa, amasampuli akhethwe ukuhlolwa, lapho, njengoba abakhiqizi beqinisekisile, kwakungenayo i-soy kanye nezinye izilonda zamaprotheni, futhi bazama ukuthola ukuthi izinga lomkhiqizo lihlangabezana namazinga nokulindela kwethu. Ukudla kwasekuseni okuwusizo kwabavakashi abakhuthele kungaba yimuphi ukulondolozwa, inyama noma isitshulu.
Ukudla okunye. Kuphila kwakho kunezikhathi lapho kungenakwenzeka ukupheka kwasekuseni kusuka inyama ehlanzekile noma enqanyuliwe, futhi akunakwenzeka ukupheka nhlobo. Futhi-ke sikhumbula isikhala. I-charm yayo yukuthi igcinwa isikhathi eside (kuze kube yiminyaka engu-5) ekhaya. Inyama ekheniwe okusemathinini ekhanda eliphezulu namanoni aphezulu, ahlanganiswe kakhulu emathini, engeza usawoti, pepper, amaqabunga amaqabunga, ukugcoba ngokweqile nokugcoba. Kukhona inyama encane (okungukuthi i-dehydrated) inyama, lapho okubhapathizwa emanzini iphenduka into efana nenyama yengulube noma yenkomo yenkomo. Kodwa futhi, umbuzo ofanayo: ukuphika kuphi futhi kanjani, uma uhamba njalo. Kukhona futhi inyama enomsoco ewusizo, okuyinto eningi kakhulu kumnandi Ngakho-ke isidlo esinomsoco ngaphandle kwendlu, ngaphandle kwe-can of stew, akekho owakwazi ukwakha noma yini engcono futhi enhle kakhulu. Izikhathi zokuphumula eziwusizo zokuvakasha abakhuthele zithengiswa kuzo zonke izitolo, ngakho ukukhethwa kwe-assortment kuvulekile.
Umthetho wokulondolozwa. Ukwakhiwa kwamakhemikhali, ukubaluleka kwamandla, kanye nezakhiwo zokunambitha kunquma inani lokudla okunomsoco. Enyameni, okubaluleke kakhulu kuyiprotheni ephelele ye-digestible kanye ne-zatrak ewusizo. Amaprotheni wezilwane yikudla kobuchopho bethu, amandla okusebenza, ukukhuthazela, okuwusizo hhayi kuphela endaweni yokusebenzela, kodwa futhi nangesikhathi sokuphumula. Noma kunjalo inyama yenkomo, iqukethe insimbi eningi. Ukugcina konke lokhu ekuzaleni inzalo ebhange kusiza, kufanele kuqinisekiswe ikhwalithi enhle yokudla okusemathinini nokuqina kwazo (Yebo, uma ekuqaleni bekhetha izinto ezibonakalayo ezifanelekayo). Inqubo yale nqubo yezobuchwepheshe iyadingeka ngomthwalo omkhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuze ukwandise ukuqina kokudla okusemathinini ngesikhathi sokugcina isitoreji, kubalulekile ukuthi izinga lokushisa lokushisa libe liphakeme kakhulu, futhi isikhathi sokushisa lokushisa sikhulu. Ngakolunye uhlangothi, ekushiseni okushisa okushisayo, isakhiwo senyama siyabhujiswa, futhi lokhu kuholela ekudakaleni kwezimfanelo zayo, isibonelo, ukuvuvukala nokuphuza okukhulu. Okufanele kakhulu ukuzalisa inzalo yizinga lokushisa lama-121.1 degrees. Kulo lokushisa, ngisho nezincane ezincane eziphikisanayo ziyafa.
Tushenku - izimpondo!
Ngakho-ke, ngokukhetha ngamabomu amabhange asindayo "Ngenkomo ngokomso wayo," asifuni ukudonsa lo mthombo ohlangene weprotheni ngokwawo, lapho umthombo wamaprotheni kuphela u-7-10%, kanti konke - "izimpondo nezinselo." Ngakho-ke, ukunyuka kokuhlola ukuhlonza isitshalo. Okokuqala hlola ukuthi inani lenani lamanoni ngamazinga. Ngokusho kwama-GOST, izingxenyana zabo zenza ama-56.5% emifino eboshiwe, kanye no-54% ebangeni lokuqala. Bese uhlola inani lamafutha. Kufanele ibe ngu-17%, hhayi ngaphezulu. Inyama, i-anyanisi, i-pepper, i-leaf leaf, amafutha - lawa yizingxenye zalesi sitshalo.
I-Pearl yaseNingizimu Afrika: ubuhle nezindawo zaseKapa
Izindawo zokuhlala zaseGibhithe
Yini okumjabulisayo othandekayo wakho ngosuku luka-Valentine?
I-Morshyn Resort, e-Ukraine
Izindawo zokudlela ezidume kakhulu eThailand
Ukuphumula ebusika nomntwana omncane
Ukukhishwa kwezinwele, ukususwa kwezinwele unomphela
Kulich ku Baker - zokupheka ezilula futhi ezihlwabusayo isinyathelo-by-isinyathelo nge isithombe for onobuhle Panasonic, Moulinex, Redmond, Kenwood
Ingulube ihamba nge-ketchup eyenziwe ngokwenza
I-Autumn Festival iyiskripthi enkulisa enkulisa, ekulungiseleleni nasezingeni eliphakeme
UMoscow usungula umqondo omusha wegama leMeucci
Izingane kufanele zilungele kanjani ekilasini lokuqala
Isaladi ngezinkuni zomhlanga kanye nommbila
Okufanele ukwenze uma umngane eba umthwalo kuwe
UGalina Yudashkin okhulelwe wathuthela e-US: indodakazi yomklami wemfashini yamangalelwa ngokuhlubuka
UDana Borisova uqale watshela ngesipho esivulekile esivela kulesi sigameko sengozi
Inyanga yesishiyagalombili yokuthuthukiswa kwengane